ခေါင်းမြှီးခြုံလို့သာ အိပ်ယုံပေါ့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ခေါင်းမြှီးခြုံလို့သာ အိပ်ယုံပေါ့
Posted by ခင်ခ on Mar 14, 2013 in Creative Writing, My Dear Diary | 47 comments
ဟိုရေးဒီရေး အတွေး။ နီုင်ငံရေး သရော်စာ
အချိန်ကာလက ၁၉၈၈ ခုနှစ် ၀န်းကျင် စစ်အစိုးရအာဏာရလာပြီး ညလမ်းမပေါ်မထွက်ရ အမိန့်ထုတ်ပြန် ထားစဉ် ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ လမ်းမကြီးတစ်ခုတွင် သွားလာသူကင်းမဲ့နေသော ည အချိန်၌ ထိုလမ်းမကြီးကို တိုက်ခန်း ၀ရံတာ လေးတစ်ခုကနေ လူတစ်ယောက်ငေးမောကြည့်နေစဉ် စစ်သား ၁၅ ယောက်ခန့် လက်နက်အပြည့် အစုံနဲ့ အုပ်စုလိုက် ကင်းလှည့်သည့်သဘော လျှောက်လာကြပြီး ထို စစ်သားများလျှောက်လာသည့် လမ်းမ လယ်တွင် ဖားတစ်ကောင်ကလည်း မလှုပ်မယှက်နေ နေတာကို ခုန ၀ရံတာပေါ်ကလူသည် မြင်တွေ့နေပါ၏၊ အဲဒီလူရဲ့ စိတ်ထဲမှာ ဒီဖားတော့ စစ်ဖိနပ်အောက်မှာ သေတော့မှာဘဲလို့လဲ ထင်နေတယ်ပေါ့၊ မကြာပါဘူး ခုန ကင်းလှည့် လာတဲ့စစ်သားတွေ ဖားအပေါ်က ဖားနားက ဖြတ်လို့ချီတက်သွားကြတယ်တဲ့၊ အဲလိုနဲ့ စစ်သား အုပ်စုလိုက် ဖားပေါ်ကနင်းပြီး ဖြတ်ကျော်သွားပြီးအခါ ၀ရံတာပေါ်က ခုနမြင်နေရတဲ့ ဖားကိုသေချာ လှမ်းကြည့် နေစဉ်မှာဘဲ ဖားကလည်း ခုန်ပျံကာ လမ်းဘေးကို သွားနေလိုက်တာ မြင်ရတယ်ပေါ့။
ဒီအဖြစ်ကို စဆုံးမြင်ခဲ့တဲ့ လူက ကောက်ချက်ချမိတယ် “သြော် စစ်ဖိနပ်အောက်မှာ ဖားနေတတ်ရင် မသေ ဘဲကိုး။´´
အချိန်ကာလက အခုအုပ်ချုပ်တဲ့ အစိုးရတက်လာပြီး ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်ဖို့ ပါတီတွေ စည်ရုံးရေး အမြို့မြို့ အနယ်နယ်ကို ဆင်းပြီးမဲအောင်နိုင်ရေး ဟောပြောကြတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မန်းကိုရောက်ပြီး ဟောပြောမယ်လုပ်တော့ ပြည်သူလူထုများစွာ ဟောပြောမည့်ကွင်းအပြည်ုရောက်နေကြတော့ လူထု ခေါင်းဆောင်က ရှေ့က မတ်တပ်ရပ်တဲ့သူတွေ စနစ်တကျလေးထိုင်ပေးကြရင်ကောင်းမယ်လည်းဆိုရော ရှေ့မှာ ရပ်နေတဲ့ ပြည်သူလူထုက တစ်ညီတစ်ညာတည်း ထိုင်လိုက်ကြတယ်၊ အဲဒီမှာ ပြည်သူလူထုတစ်ယောက်က ထိုင်လိုက်ပြီးမှ ချက်ချင်းပြန်ထကာ သူထိုင်တဲ့နေရာကိုငုံကြည့်လိုက်ပြီ ဟာ ဒီဖားကြောင့် တင်ပါးအေးကထဲဖြစ် သွားတာကို အတော်ရှုပ်တဲ့ဖားဆိုပြီး ဖားကိုဖမ်းကိုင်ကာ အဝေးကိုလွင်ပစ်လိုက်တယ်လေ၊ အဲဒါကို ထိုလူအုပ် ထဲက လူတစ်ယောက်က အစအဆုံးသတိထားမြင်တွေ့နေတယ်ပေါ့။
ဒီအဖြစ်ကို စဆုံးမြင်ခဲ့တဲ့ လူက ကောက်ချက်ချမိတယ် “သြော် ပြည်သူလူထုက ဖားတာရှိရင် မကြိုက်တတ် ဘဲကိုး။´´
မိုးရာသီအစ မိုးလေးတစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်လောက် စရွာပြီဆိုရင်တော့ ဟိုနေရာက အုံးအင် ဒီနေရာက အုံးအင် အဲလို အုံးအင် အုံးအင်နဲ့ ဖားမျိုးစုံ မိုးခေါ်ကာ သံပြိုင်အော်ကြလေရဲ့လေ၊ အဲဒီအခါကျ နားညီးလို့ မီးတုတ်ဆွဲ ကာ အော်တဲ့ဖားတွေ တုတ်နဲ့လိုက်ရိုက်လည်း အကုန်လုံးမရိုက်နိုင်ဘဲ အများကြီး ပတ်ပတ်လယ်ဝိုင်းကာ အော် နေတာမို့ ဘယ်တတ်နိုင်မလဲ၊ ထိုအခါ ဖားတွေအော်သံ နားမခံသာရင် စောင်ကိုခေါင်းမြှီးခြုံလို့သာ အိပ်ခဲ့ရ ပါတယ်လေ။
အဲလိုအဖြစ်ကြုံခဲ့တဲ့ လူကလည်း ကောက်ချက်ချမိတယ် “သြော် တက်ညီလက်ညီ အများစုကာ ပြိုင်တူဖားသံ ပေးနေကြရင်တော့ ဘယ်တတ်နိုင်မလဲ ခေါင်းမြှီးခြုံလို့သာ နားပိတ်အိပ်ပေတော့လို့…………..´´
ဆရာခရေ ဖားများကအော်လွန်းတာမို့ မျက်စေ့လည်းနောက် နားလည်းနောက် ခေါင်းမြှီးခြုံ နားပိတ်ကွေးကွေးလေးအိပ်ပါတော့မယ်လို့…………..
ဦးဆုံးရောက်ကာမန့်သူ ကိုကျောက်ရေ ကျေးဇူးပါ၊
ခေါင်းမြှီးခြုံကာ အိပ်တာတော့အိပ်တာပေါ့ ဒါပေမယ့် ခဏခဏ အဲလိုကြီးအိပ်ရလို့ မွန်းကျပ်မှု့တွေများလာရင်တော့ ပေါက်ကွဲသံတွေ ဒေါသတွေများ ထွက်လာမလားလို့လေ။
အန်ကယ်ခ အနေနဲ့ ဖားတေဆီက ခွင့်ပြုချက်ယူသင့်တယ်ထင်ပါကြောင်း
ပို့စ်အသွားအလာအရ ဖားကိုအကြောင်းပြုရေးသားတဲ့ ဖားစတိုင်ယာ ဖြစ်နေတာကြောင့်
နွေခေါင်ခေါင်… ဖားတွေလဲ သံပြိုင်အော်… မီးတုတ်နဲ့လဲလိုက်မရမ်းနိုင်…
နားပိတ်ပြီးလဲ အိပ်မရဆိုရင်… ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ အစ်ကိုကြီး… လုပ်စမ်းပါဦး…
အသံတွေ ကြားလို့ … အူတူတူ အိပ်မှုံစုံမွှား ညက်လုံးလေး ကလည် ကလည်နဲ့ . ကျီး ကန်းတောင်းမှောက် လိုက်ကြည့်ရင်း …. အကြံတစ်ခု ရသွားပါတယ် … ။ အကြော်ရောင်းဦးမှပဲ ….
ပြောင်းဘူးဂျော်….. ဘလာဂျော် ….. နှမ်းကပ်ဂျော်….ဖားဂျော် … ငါးဂျော် ……. ခွိခွိ …… ။
ကိုခင်ခ ပို့စ်လေးဖတ်မိမှ သတိရတယ်..
ဖားနဲ့ ပက်သက်လို့ ကြားဖူးတာလေး..
ဖားတွေက ရေနွေးအိုးထဲ ထည့်ပြုတ်မယ်ဆို..
အောက်က မီးမပူမချင်း ရေအေးလေးထဲမှာ ဇိမ်နဲ့ နှပ်နေတတ်တယ်ဆိုလား..
လွတ်ဖို့မကြိုးစား..မပူမပင် အေးဆေးပဲ .တဲ့
နောက်ကြာလာတော့ အောက်က တိုက်တဲ့ မီးပြင်းပြင်းကြောင့်.
ရေနွေးလည်း ဆူလာ.ပူလာရော ခုန်ထွက်လို့လည်း မမှီ..
နောက်ဆုံး အနိစ္စသဘောနဲ့ ကိစ္စချောရလေရော..
သူ့ဆီအပူကူးသောအချိန်၌ ဆေးမမှီပဲ.ဖားကင်ဘ၀ရောက်တတ်သည် ..
ပြောရပြန်ရင်လည်း ဆရာမ လွန်ရာကျတော့မယ်ရယ်။။
ရေနွေးထဲ ထည့်ပြုတ်တာ ဖားကင် ဖြစ်ပါ့မလားလို့။
အဲဒါ ဖားပြုတ် ဖြစ်မှာ။
ကိုဂျီးမတ်တို့ လမ်းဟောင်းကို အေးဆေးမလျှောက်ဘူး။
အွန်.. လမ်းဟောင်းကြီးကို ထဲ့မပြောပါနဲ့ ဗျာ.စိတ်နာလွန်းလို့.
ကျော်က ဖားတွေပြုတ်တဲ့အကြောင်း ပြောပီးသားမို့..
တခါတည်း ဖားကင် လေးကို မြင်အောင်ရေးပြတာရယ်ပါ…
ဆိုတော့ ဖားပြုတ်မှ ကြိုက်တတ်ရင်လည်း ဖားပြုတ်ပေါ့ ဗျာ..
ကနေ့တော့ ရွာထဲက ဖားဂီလည်း ..
ဂလောက် ခြစ်စာ ကောင်းတဲ့ ဖားကို ဗီလိန်ပဲ သုံးဂျဒယ်….
ဖားသတ်နည်း ဖားချက်နည်းတွေလည်း စုံလို့…
ရေးဂျပါဒေါ့လားဂျာ.. ..မင်းတမီးလေးက အာပွားရှလူးလိုက်လို့ ..မင်းတားလေးဖြစ်ပြီး
ဖားကိုပြုတ် အရေခွံနွာပြီး ကင်တာ လာမှမသိတာ မခိုင်ဇာရေ၊
ပြုတ်ပြီး ရင် ကင် လို့ မရတော့ဘူးရယ်။
ဖား ကိစ္စမှာ ပြောတာ။
ဖား ပို့(စ) ကို ဖားသက်ပြင်း မလာသေးဘူး။
မှောက်ရက်လဲတိုင်းခြင်္သေ့က ရောက်နေသလားတော့ မသိဘူး
ဟုတ်သားဘဲ ဖားကိုပြုတ်မှတော့ (သတိ ပြောင်းပြန်မဖတ်ရ)
ဖားတွေများလာရင် တော့ နားပိတ်အိပ်လဲ မရဘူးဗျ.
ကျနော်အိမ်နောက်ဖေးက မြောင်းထဲက ဖားကိုအတော်ဆူတယ်ဆိုတော့
အဲတော့ ဖားလဲသေအောင်ခေတ်လဲမှီအောင် ဟိုမှာတုန်းက သုံးလိုက်တဲ့လက်နက်သုံးမှရမယ်ထင်တာဘဲ။
ဒါက ဂလိုရှိတယ် ဗျ..
မှောက်ရက်လဲမှတော့ ဖားရှေ့မှာလဲရင် ဘုဘမသိ ထအော်နေမှာရယ်.
ခြင်္သေကတော့ခလုတ်တိုက်စာ မစားသလို ..
ဖားတွေထက်စာရင် ခြင်္သေကိုလည်း ပိုခြစ်သမို့.
လဲ မဲ့ လဲတော့ ဒင်းရှေ့ကပိုကောင်းပါသဗျ..
(ဆိုတော့ကာ ခြစ်လို့ လဲတယ် မှတ်ပါ…)
ဂလို ပါ ။
တခြားလူ ချော်လဲတာကို မြင်ဘူးသော်လည်း
အမတ်မင်း ချော်လဲတယ်ဆိုတာ နဲနဲ ထူးဆန်းသလားလို့ လိုက်ချောင်းမိတာပါ။
အနော့ အပြစ် ပါလေ။
ဒီ ဖားတွေက “ငါ့ဝမ်းပူစာ မနေသာလို့ အော်ရတယ်” ဆိုပဲ။
ကျုပ်တို့ဆီမတော့ တနင်္ဂနွေ နေ့ဆို ဖိလစ်ပီနို ကလေးမတွေက အောချာတ်မှာ အများကြီးကလား။ ပိတ်ရက်ကိုး။
အဲဒီကိုသွားပြီး လမ်းကြုံသွားပတ်သက်ဖို့ ကြိုးစားရင် “ဖားသွားရိုက်တယ်” လို့ ပြောကြတာပဲ။
(မယုံ ဖေကြီး ကျောက် ကို မေးကြည့်။)
ကျန်တာ ကျနော်သိတဲ့ ဖားကတော့ စားလို့ရတဲ့ ဖားပဲသိတယ်။
– ငရုတ်သီးနဲ့ ကြော်စားစား
– ဒီ တိုင်း မြည်းဖို့ ကြော်စားစား
– မြေအိုးချက် ချက်စားစား
– ကင် စားစား။ (ရိုးရိုးပဲ တွေးကြပါ)
ပြောရင်း စားချင်လာပြီ။ သွားရိုက်ဦးမှပါ။ (စားသောက်ဆိုင်က ဓာတ်ပုံတွေပြောတာပါ။)
ဒါနဲ့ ဘယ်သူရေးတုန်းမမှတ်မိလို့။ လုပ်ငန်းခွင်က ဖား များ အကြောင်းဆိုလား ဖတ်ဖူးသလိုပဲ။
ဦးကျောက်က ဖားလည်းမရိုက်… ရွှေလည်းမကျင်… အ မတွေကိုလည်းမပိုး ခပ်ရိုးရိုးပဲနေခဲ့တာပါ…
အဲ… စားလို့ရတဲ့ သတ္တဝါဖားကတော့… လာထား… အရိုးပါကိုက်ပလိုက်မယ်…
တောက်စ်… ရွာပြန်ရင် နွေခေါင်ခေါင်… “ဖား” မပေါ်သေး…
ခု ရထားလည်း စီးတတ်နေပြီဆိုတော့ ဒက်ဒီကျောက် ပညာစုံဘီ။။
ကြင်ယာလေးပဲ စုံ ဖို့ပဲ (အဝေးကြီးမှာ) ကျန်တော့ တယ်။
ဖားနဲ့ ပါတ်သတ်တာ အတည်မန့်ပါဦးမယ်လေ..
ရေသတ္တ၀ါမှာ အူလမ်းကြောင်းအဆုံး (စအိုပေါက်) က ရှေ့..
ဆီးနဲ့ လိင် အပေါက်က အနောက် မှာရှိသတဲ့ …
ကုန်းနေရေနေ သတ္တ၀ါ ဖြစ်တဲ့ ဖားကျတော့ ..အနှီ ၃ပေါက်လုံးက သဗ္ဗ ဘုံ အပေါက်
ဟောင်ကောင် အခြေစိုက် တီရှပ် ဂျင်းပန်င် ရောင်းစားတဲ့
ဂျော်ဒန်းနိုး က ကနဦးတုန်းက တစောင်းထိုင်နေတဲ့ ဖားပုံကို
အင်္ကျီရင်ဘတ်မှာ လိုဂိုဆန်ဆန်သုံးတယ်ခည…နောက်ပိုင်း မသုံးတော့
၂၀၁၀လောက်မှာ တခါပြန်သုံးတယ်.. customerဟောင်းတွေကို Brand recall လုပ်တဲ့သဘောပါပဲ
နောက် generation ကိုလည်း စတင် ထိတွေ့တဲ့ သဘောလည်းပါသပေါ့လေ..။
ဖားအော်လို့ မိုးရွာမရွာက မသေချာပါဘူးဗျာ…။ လူရိုက်မှာနဲ့ မြွေကိုက်မယ့်အန္တရာယ်တော့
နီးသား ..။ အဲ .. အော်တာပဲလေ .. တားမရဘူး..။ ဦးနှောက်သောင်ထွန်းနေတဲ့ ဖားမျိုးလည်း
ကိုကျောက် ဖားပြုတ်ရော မကြိုက်ဘူးလား
အလ် ဖားကန်ထရိုက်နဲ့မှ တည့်တည့်တိုးပါပေါ့လား မရွှေအိရေ။ မသိလို့ပါဗျ ဖားတေဆီက ခွင့်ပြုချက်လေး ယူပေးပါလားကွယ်။
ကိုကြောင်ဝတုတ်ရေ အိပ်မရရင်တော့ ငုတ်တုတ်သာထိုင်နေပေတော့ဗျို့ ဖားသံကတော့ ရပ်မယ်မထင်။
ဖားဂျော်တော့မကြိုက် ငါးဂျော်တော့ကြိုက်၏ မအိတုံရေ။
မခိုင်ဇာရေ “ငါ့ဝမ်းပူစာ မနေသာလို့ အော်ရတယ်” တဲ့လား ဟုတ်မယ် ဟုတ်မယ်ဗျ။ သူ့တို့ဝမ်းကလည်း ပူ ပူနိုင်လွန်းလားဗျာ။
“ငါ့ဝမ်းပူစာ မနေသာလို့ အော်ရတယ်”
တစ်ခါတစ်လေ ဘာမသိညာမသိနဲ့ သူများအော်လို့ဝင်အော်တဲ့ဖားလဲ ရှိတယ်ကြားဘူးတာဘဲ။
ကိုခင်ခရဲ့ ဖားသီအိုရီနဲ့ အရေးအသားလေးတွေကတော့ တကယ့်ကို ရှယ်ပါပဲနော်။
TheWinner ရေ ဖတ်ရှု့အားပေးကွန်မန့်လေးအတွက် ကျေးဇူးပါနော်။
သူမကိုက်ခင် အရင်သာပြေးရိုက်လိုက်တော့ကိုခရေ…. :harr:
ပဲခူးကျော်လို့ ဘုရားကြီးရောက်သွားပြီ… မော်လမြိုင်ဘက်ကွေ့ရမလား…
ယခုလတ်တလော ဦးဖွတ်ကျား ဆိုတဲ့ အရှေ့ကျွန်းက
မာကက်တာဟာ တချိန်တုံးကတော့ “ဖါး”တစ်ကောင်ပါဗျာ..
ဒါကြောင့်တော်ရုံရိုက်ချက်လောက်နဲ့တော့ မသေနိုင်ဘူးဗျ.. :harr:
ကိုကြီးမိုက်ရေ အဲဒါတော့ အနော်မသိဘူးဗျ၊
အခုပိုစ့်ထဲမှာပါတဲ့ ဖား က တိရိစ္ဆာန်အခေါ်ဖားကို ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူး
အထက်ကို ဖော်လန်ဖားနေကြတဲ့ ဘန်းစကား ဖား တာကို လှည့်ပတ်ရေးထားတာပါ။
နိုင်ငံရေးသရော်စာပါ။ တံတားနီ လက်ပန်တောင် စတဲ့ အခုတလောသတင်းတွေ ဖတ်မိပြီး တွေးမိတာကိုရေးတာပါ။
ကိုကြီးမိုက်ပြောတဲ့ နစ်နိန်းပိုင်ရှင်နဲ့ မဆိုင်သလို တိုက်ဆိုင်သွားရင်လည်း တောင်းပန်ပါ၏ဗျာ။
ဒါပေမယ့် ဖတ်တဲ့သူတွေက ဘယ်လိုခံစား နားလည်သလဲတော့ မသိဘူးလေ။
ဦးခရေ … တိုက်လည်း မတိုက်ဆိုင်သလို တောင်းလည်း တောင်းပန်စရာမလိုပါဘူးဗျာ…။
ကျနော် ကိုယ်တိုင်က ဖား ဆိုတဲ့ သတ္တ၀ါကို မြန်မာရိုးရာမှာ မကောင်းတဲ့နေရာ
မကောင်းတဲ့ပြယုဂ်အဖြစ် သုံးမှန်းသိသိနဲ့ ခြားနားတဲ့ အဓိပ္ပါယ် ဖော်ဆောင်မှု တခုအရ
သုံးချင်လို့ကို နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ် သုံးနေတာ ဖြစ်ကြောင်းနဲ့…
ဖားအကြောင်းရေးကြပြောကြတိုင်း မိမိနဲ့ မသက်ဆိုင်သလိုသဘောထားရင်း…
ခင်မင်ရင်းစွဲရှိတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေက စတာ နောက်တာတွေကို ပြန်လည် စရင်း
နောက်ရင်း နဲ့ ..ဖြတ်သန်းနေတာပါဗျာ..
သရော်စာအတွက်တော့ လက်ခုပ်တီးအားပေးနေတဲ့အကြောင်း ရယ်ပါ…
ငယ်ငယ်တုန်းက ဖားလောင်းလေတွေကိုဖမ်းပြီး ဖန်ခွက်ထဲထည့် ရေနဲ့ဖျော်ပြီး ကျောက်ကျောဖျော်ရည် ရောင်းတမ်းကစားကြတာ အခုတွေးပြီး ၀ဋ်လည်မှာကြောက်တယ်
ကြံကြံဖန်ဖန်ဆော့လည်း ဆော့တတ်ပါ့ ဗုံဗုံရယ်..
ဆော့လို့ အားရတော့မှ တစ်ကောင်ချင်း လက်နဲ့ ဗျစ် ဆိုပြီး ညှစ်ပစ်လိုက်တာ ဦးကြီးမိုက်ရဲ့ အီးး ဟီးးဟီးး ကြောက်ပါတယ်ဆိုမှ
ဖားအကြောင်းဆိုလို့ …. ဒီလိုတွေပြောကြသလားလို့ပါ …
ရေတွင်းထဲက … ဖား … ကျွဲခြေရာခွက်ထဲ က … ဖား
ရေတွင်းထဲမှာပဲ ကြီးလာခဲ့တော့ ရေတွင်းထက်ကျယ်တာ မမြင်ဘူးတော့ဘူး။ အဲ့ဒီလိုမျိုးအဓိပါယ်ဖွင့်ကြလားတော့မသိ။
ဖားကပ် တဲ့ .. တွေ့ရာမြင်ရာ ခုန်ကပ်ပြီးတွယ်နေတော့တာပဲ။
နောက်ရှိသေးတယ် ဖားပြုတ်တဲ့ .. မယုံရင် သွားပြီးကျောက်ကုန်းကို ဒုတ်နဲ့ရိုက်ကြည့်ပါလား … ကုန်းထ
သဗျို့.. ရိုက်လေ ကြွတက်လေပဲ။ တော်တော် ကောင်းမာတဲ့အမျိုး သေအောင်ရိုက်တော့လဲ အဆိပ်ရှိတော့ ချက်စားလို့လဲမရဘူးလေ။ ဒုက္ခ … (ဖားမျိုးနွယ်တွေအကြောင်းပြောတာပါ )
ဖား ဆိုလို့ ငယ်တုန်းက စာသင်ကျောင်းကို ပြေးသတိရ တယ်။
ဆွဲခြင်းတစ်ဖက်၊ စာအုပ်တွေ တစ်ဖက်နဲ့ မနိုင်မနင်း လာနေတဲ့ ဆရာမ ကို သွားပြီး ကူသယ် ပေးတဲ့သူ ကို ဖား လို့ ဝိုင်းစ ခဲ့တာ။
အဲဒီတုန်းကတော့ ဖားလို့ ခေါ်လိုက်တဲ့ သဘောက တမင်မျက်နှာလို မျက်နှာရ ဆရာမ ဆီက အမှတ်ရအောင် လုပ်တယ် ပေါ့။
အခုပြန်တွေးလိုက်တော့ – ဆရာမ မှာ ဝန်ပိနေတာကို သွားကူတဲ့ သူကို လှောင်မိတာကိုး။
တကယ်တော့ သူ့ဆီမှာ ဘယ်လိုစိတ်ကူး နဲ့ ဘဲ ဆရာမကို ကူကူ
အကူအညီ လို လို့ ကူ လိုက်တဲ့ အဓိက အကြောင်းကို မကြည့်ခဲ့တာ။
ဒါပေမဲ့ ဒါဟာ ကလေးစိတ် ဘဲလေ။
ပြောချင်တဲ့ နိုင်ငံရေးမှာ ငယ်ဘဝ ကျောင်း အရေးလာပြီး ဝင်ရှုပ် ခဲ့တာမို့ ခွင့်လွှတ်ပါ ကိုခင်ခ ရှင့်။
ဖားဆိုတာ ထိုကဲ့သို့ ရှိသကိုး………..
ကျုည်းဖားတွေ့ရင် ရိုက်ပီး အရက်နဲ့ မြည်းချင်စိတ်တော့
ငယ်ငယ်တုန်းကနေခဲ့တဲ့ ကျမတို့ အိမ်နောက်ဖက်က ရေကန်ကြီးထဲမှာ ဖားတွေနေကြတယ်. ကျမ တို့ ကဖားသားမစားတော့ သူတို့ ကအုပ်စုတော်တော်တောင့်တယ်.မိုးညတွေမှာ အုံးအွမ်….အုံးအွမ် သီချင်းနဲ့ အိပ်ပျော်ခဲ့ ရတာ လွမ်းစရာပဲ.. ဖားဥတွေက အဖြူညစ်ညစ် ဖွဖွ နဲ့ အဆုပ်လိုက်ရေကန်ထဲမှာ..ကျမတို့ မောင်နှမတွေ ရဲ့ ကစားစရာ ဘောလုံးတွေပေါ့ .. နောက်တော့ဥဖြူဖြူလေးတွေကနေ အကောင်ရှည်ရှည်မျောမျောနဲ့ဖားတစ်ပိုင်းငါးတစ်ပိုင်လေးတွေ ပေါက်လာတယ်. ကျမ တို့ ကလေးတွေအတွက် အထူးအဆန်းပါ..ဘာဖြစ်လို့ ခုန်ဆွ ခုန်ဆွ နဲ့အသံပြဲပြဲ ကုန်းပေါ်နေတဲ့ ဖားကငါးတွေ ပေါက်ရတာလဲ..အင်း..အဲဒီ ငါးကလဲခြေထောက်တွေနဲ့ …. ဟီး…ကလေးအတွေး…..
ကိုခ ခင်ဗျား ဖားဆိုတာက တစ်ကောင်က စအော်မှ နောက်ကအကောင်တွေက စအော်တာတဲ့….။ သူ့သဘာဝ ဖိုသံမ သံပေးတယ်ပေါ့ဗျာ …။ ဖားဆရာတစ်ယောက်က အဲဒိလိုပြောတာပဲ…။ ပြီးတော့ရှိသေးတယ် ….။ ဖားအော်တာက နွေရာသီ မြေကြီးထဲမှာနေရတော့ မြေငွေ့နဲ့ လေရှုတယ်ပေါ့ …။ အဲဒိအတွက်ကြောင့် သူတို့ရဲ့ အာခေါင်တွေက ခြောက်နေသတဲ့ …။ မိုးရနံ့ ပါတဲ့လေအေးအေးပဲဖြစ်ဖြစ် မိုးရေပဲဖြစ်ဖြစ် ထိလိုက်တဲ့အခါမှာ အာခေါင်က နာလို့ အော်ပါသတဲ့ ……။ ဘာကြောင့်ပဲအော်အော် ကျွန်တော်ကတော့ ဘွတ်ဖိနပ်ရှည်ရှည် စီးပြီး ရေစပ်စပ်ရှိတဲ့နေရာတိုင်းကို တွဲဗို့ဘက်တရီးတစ်အိုးနဲ့ ရှော့ခ်လိုက်တိုက်ချင်တယ် ….။ နားငြီးလို့ …………။ :harr: :hee:
ဖားတယ်လို့ ပဲ ပြောပြော
အလိုက်သိတယ်လို့ ပဲ ခေါ်ခေါ်
ဘွဲ့ မလိုတဲ့ ခေတ်က နောင်၅နှစ်ကျော်အထိ ပပျောက်ဦးမယ့်ဟန် မတူဘူး ထင်ပါရဲ့ 
ရေအိုင်ထဲက ဖားလေးတွေဘဝကလဲ သနားစရာပါဗျာ
“တုံးအောက်ကဖား ပြားတဲ့ဖားကပြား ဖေါင်းတဲ့ဖားကဖေါင်း ဖားဖေါင်းဖားပြား”
လျှာမလိပ်တဲ့သူ.. . ဖားပြုတ်သီအိုရီဆက်ဖတ်..။
၀င်ရောက်ကာ ကွန်မန့်ပေးကြသူများကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ။
ဖားတတ်ရင် နေရာရတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ ဖော်လံဖားလို့ အပြောခံရတာ
နံမယ်သာဆိုးတာ ပိုဇစ်ရှင်(position=ရာထူး) မဆိုးဝူးခည
ဆိုတော့ ဖြူဖြူကျော်သိန်း သချင်းဘဲဆိုတော့မယ်.
အခါးတေ အခါးတေ ငါချစ်သောမိုးခါးရေ…… အခါးတေ အခါးတေ ရင်မှာစုတ်ပြတ်နေပစေ :harr:
“သြော် စစ်ဖိနပ်အောက်မှာ ဖားနေတတ်ရင် မသေ ဘဲကိုး။´´
“သြော် ပြည်သူလူထုက ဖားတာရှိရင် မကြိုက်တတ် ဘဲကိုး။´´
“သြော် တက်ညီလက်ညီ အများစုကာ ပြိုင်တူဖားသံ ပေးနေကြရင်တော့ ဘယ်တတ်နိုင်မလဲ ခေါင်းမြှီးခြုံလို့သာ နားပိတ်အိပ်ပေတော့လို့…………..´´
ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာ အဲဒီ သုံးကြောင်းပါဘဲ။ တစ်ချိန်တုန်းက စစ်အစိုးရ အာဏာရလာတယ် အဲဒီမှာ စစ်အစိုးရကို ဖော်လံဖားပြီး ပလူပလဲနေခဲ့ကြသူတွေ တင်းကြပ်တယ် လုပ်ပိုင်ခွင့်မရဘူး စတဲ့ကြားထဲက စီးပွားမသေတဲ့အပြင် ခရိုနီတွေတောင်ဖြစ်ခဲ့တယ်၊ ဒီလိုဖားနေတဲ့လူတွေကို ပြည်သူလုထု အများစုကိုမေးကြည့် ကြိုက်သလားဆို မကြိုက်ခဲ့ကြဘူး၊ အခု လက်ပံတောင်အရေး အစီရင်ခံစာ ထွက်လာ တယ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အဲဒီ အစီရင်ခံစာကိစ္စလိုက်ရှင်းတယ် အဲဒါကို ဘေးကသွေးထိုးတဲ့သူတွေရဲ့ စကားနားယောင်ကာ အလိုမရှိဘူး ဘာဘူး ဆန္ဒပြမောင်းထုတ်တယ် အဲလိုအသံတွေကြားလေ ဆရာ ဆရာကြီးတွေကြိုက်လေဘဲ အရင်တုန်းထဲက အဲလို ဖား ပြီး အော်သံတွေ သံယောင်လိုက်သံတွေကြောင့် ဒို့တိုင်းပြည် ပြည်သူလူထုအပေါ် သူတို့တွေ အနိုင်ယူနေခဲ့ကြတာကို ခံပြင်းလွန်းပေမယ် ကိုယ်လည်း ဘာမှမတတ်နိုင်လို့ စိတ်မကောင်း စွာနဲ့ ဆက်ကြားနိုင်ခံနိုင်စွမ်းမရှိလို့ ခေါင်းမြှီခြုံသာ အိပ်ရတော့ မယ်လို့ ရွဲ့ကာရေးလိုက်တာပါဘဲဗျာ။ အခုပိုစ့်ရည်ရွယ်ချက်လေးအတိုင်း ထပ်တူမဟုတ်ပေမယ် နီးစပ်တယ်လို့ဆို၍ရသော မရွှေအိရဲ့ ကွန်မန့်ကိုတော့ BC ပေးတယ်ဗျာ။
ကျနော်ကလည်း ငတုံးငအ ဆိုတော့ 
ကဲ ကဲ အိပ်မပျော်ဘူးလား ရွှေပုပ္ပါးသွေးဆေးကိုစား တဲ့ 
ကိုဆာမိရေ အိပ်ချင်ယောင်ဆောင်နေတဲ့သူကို နိုးရအခက်ဆုံးတဲ့
ဘာရယ်ဟုတ်ဘူး ကြားဖူးတာလေးကို ပြောချင်လို့ပါ။
ခေါင်းစဉ်ကို ဖတ်ပြီးတော့ သတိရမိတာက အဲဒီစကားထာ
တစ်ဆက်တည်းမှာ ဦးမာဃ ပညာရင်နို့ သောက်စို့ခဲ့ရတဲ့ တော်ဝင်သံတဲကျောင်းတော်ကြီးကိုပါ ပြန်သတိရမိသွားတယ်
မိုးရာသီဆို ကျောင်းကြီးအောက်က ရေမြောင်းထဲမှာ ငါးဖားလောင်းလေးတွေ ပေါမှပေါ။
(လေးခ ဖားအကြောင်းရေးလို့ ဖားအကြောင်း ပါအောင် ဆွဲပြောထားတာ :P)
ဒါနဲ့ ဆြာပေါက် အဲ့ကျောင်းကို လက်မဆော့ဖူးသေးဘူးရယ်